Akhri: Imisa qof ayaa loo xiray geerida Taliyihii booliska Soomaaliya Jen. Maxamed Xasan Ismaaciil? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Imisa qof ayaa loo xiray geerida Taliyihii booliska Soomaaliya Jen. Maxamed Xasan Ismaaciil?
31st October 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa baareysa geeridii shalay galab ku timid taliyihii ciidamada booliska Soomaaliya, General Maxamed Xasan Ismaciil, kaasoo si kedis ah ugu geeriyooday Isbitaal ku yaalla degmada C/caziiz, kadib markii uu kusoo booday xanuun.
Markii shalay galab ay soo baxday geerida degdega ah ee taliyaha ayaa ciidamada amaanka Soomaaliya, waxey xireen Isbitaalka uu ku geeriyooday, sidoo kale waxaa la xiray dhaqtar iyo kalkaaliye ka shaqeynayey isbitaalka.
Dhaqtar magaciisa lagu sheegay Ibrahim oo u dhashay Kenya iyo kalkaaliye C/risaaq oo Soomaali ah ayaa loo qaaday CID si su’aalo loo weydiiyo iyadoo dhinaca kalena cisbitaalka ay ciidamo gaar ah la wareegeen kuwaas oo diiday in cisbitaalka laga baxo lana galo, inkastoo markii xalay fiidkii ciidamadaas laga waaday Isbitaalka.
“Bukaanada xitaa waa loo diiday in la soo booqdo ciidamo gawaari hubeysan wata oo boolis ah ayaa la waareegay cisbitaalka waxeyna wateen dhaqtarki iyo kalkaaliyihi “ayuu yiri mas’uul ka tirsan maamulka cisbitaalka ka tirsan oo la hadlay Radio Dlsan, islamarkaana diiday inaan magaciisa la xigto.
Sidoo kale, waxaa loo xiray geerida Taliyaha booliska Soomaaliya ee kediska aheyd gudoomiye ku xigeenka degmada C/casiis Xasan Xaaji iyo ganacsade lagu magacaabo Gurey oo ah milkiilaha maqaayad cusub oo dhawaan laga furay xeebta Liido oo lagu magacaabo Banaadir Beac.
Labadaan qof ayaa iyagana la geeyey xarunta dambi baarista CID-da, waxaan la sheegay in su’aalo la weydiinayo iyadoo sida la yiri tuhun laga qaaday.
Taliyaha ayaa todobaadki u dambeeyey macaamiil ka aha maqaayada halkaas oo uu galabta fadhiyey marki xanuunka wadnaha uu ku soo boodayey, waxaana ay wada fadhiyeen gudoomiye xigeenka iyo ganacsade Gurey oo ay saaxibo dhaw ahaayeen.
“Iyagaa qaaday oo cisbitaalka Umma la tagay una yeeray gaarigiisa aan xabadaha karin markii uu soo ritay wadno xanuunka kadibna cisbitaalka ayeey u raaceen halkaas oo uu ku geeriyooday “ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalaha maqaayada Banaaadir Beach.
Ciidamada booliska aya xalay lagu arkayey maqaayadaas ku taala Xeebta Liido iyagoo baaraya si ay u xaqiijiyaan xaaladihi u dambeeyey ee taliyaha oo halkaas gaalbta ku qaxweynayey.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed Maxamed ayaa magacaabay guddiga wasiirro ah oo ka kooban 5 xubnood oo baaritaan kusoo sameeya geerida kadiska ah ee ku timid taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
Wararka qaar ayaa sheegaya in meydka R/wasaaraha loo qaadi doono magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, iyadoo laga cabsi qabo in la sumeeyey ama la siiyey dawo khalad ah.
Dhanka kale, Ra’isul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed Maxamed ayaa Sareeyo guuto Cusmaan Cumar Wehliye (Gas-gas) si KMG ah ugu magacabay xilka Taliyaha Booliska Soomaaliyed kadib geeri ku timid saacado ka hor Taliyihii Ciidamadda Booliska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil.
Sareeyo guuto Cusmaan Cumar Wehliye (Gas-gas) oo ah Taliye xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, iyadoo uu ka mid yahay saraakiisha mudada badan ku soo jiray howlaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Wasiirka Amniga Qaranka mudane Khaliif Maxamed Ereg oo shir jiraa’id ku qabtay xafiiska Ra’isul Wasaaraha dalka ayaa sheegay in loo magacaabay Sareeyo guuto Cusmaan Cumar Wehliye (Gas-gas) in uu sii hayo xilka Taliyaha ciidanka Booliska oo uu tilmaamay in muhiim ay tahay in la buuxiyo howshii baaxada laheyd ee uu hayay General Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil.
Geerida Jen. Maxamed Xasan Ismaciil ayaa ka mid ahaa saraakiishii dowladdii kacaanka, waxaana sannadkan si rasmi ah loogu magacaabay taliyaha booliiska Soomaaliya, isagoo xilka kala wareegay taliyihii ka horreeyay, Jen. C/xakiin Daahir Siciid Saacid.
SOMALIA:PUT-UP JOB FOR COPENHAGEN CONFERENCE ON SOMALIA
Mareykanka oo digniin kasoo saaray weerar Alshabaab ku qaadan dalka Burindi